संवाद Archives - Page2of5- खबरम्यागजिन
Home > शब्द > संवाद (Page 2)
तेस्रो आयाम-बारे इन्द्रबहादुर राईसित सञ्जय वान्तवाको कुराकानी तेस्रो आयामको शव परीक्षा-मा प्रा. चन्द्रेश्वर दुबेले लेख्नु भएको छः “इलियटका लेखहरू पढ्दै गएँ र ‘वेन जोन्सन’ शीर्षक लेखमा ‘थर्ड डायमेन्सन’ लाई फेला पारेँ। तेस्रो आयामको सूत्र अब मेरो हातमा थियो।” के तेस्रो आयामको सूत्र यहाँहरूले इलियटको त्यही लेखबाट लिनुभएको हो? इलियटले त्यस लेखमा शेक्सपियरका नाटकका चरित्रहरूको तेस्रो आयाम हुन सकेको र जन्सनका…
Breaking News, मुख्य समाचार, म्यागजिन, शब्द, संवाद, साभारLeaveacomment
– नवीन पौड्याल नेपाली साहित्यमा महानन्द पौडयाल एक विशिष्ट कथाकार, अन्वेषक, निबन्धकार, चिन्तक, तार्किक र निर्भीक साहित्यकारको नाम हो। उनी 19 जनवरी, 1931 मा कालिम्पोङको बमबस्तीमा बाबु खडानन्द र आमा विष्णुकुमारी पौड्यालको घरमा जन्मिएका हुन्। उनले औपचारिक शिक्षाका क्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, काठमाडौंबाट नेपाली विषयमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरेका हुन् भने प्रायःजसो दार्जीलिङ-सिक्किमतिर शिक्षण र शिक्षा विभागतिर आवद्ध थिए। श्री पौड्यालले आफ्नो…
Breaking News, मुख्य समाचार, शब्द, संवादLeaveacomment
राजा पुनियानी साहित्यको सामाजिक दायित्वप्रति सचेत युवा कवि हुन्। उनी कविताको कलात्मक चेतना र शैलीगत परिष्कारमा सुक्ष्म रूपमा ध्यान दिन्छन्। समकालीन भारतीय नेपालीभाषी कविहरूबीच उनले आफ्नो विशिष्ट परिचय बनाइसकेका छन्। अघिल्लो वर्ष उनको फुटकर कविता ‘कश्मीर’पाठकहरूबीच निकै प्रशंसित भयो । फुटकर लेखनबाहेक पुनियानीको लामा कविताहरूको सङ्ग्रह ‘अर्को लश्कर’ प्रकाशित छ। कवि पुनियानीसँग सङ्गीत श्रोताले गरेको साहित्य–संवाद तपाईंले कश्मिरमाथि जुन कविता लेख्नुभएको छ,…
Breaking News, मुख्य समाचार, संवादLeaveacomment